LibreOffice 6.1.3 inosvika ichigadzirisa makumi matanhatu neshanu | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Gwaro Foundation yakazivisa maviri matsva mavhezheni eLibreOffice mazuva mashoma apfuura, LibreOffice 6.1.3 uye LibreOffice 6.0.7, mukuyedza kugadzirisa kugadzikana kwese uye kuvimbika kweiyi inozivikanwa multi-chikuva hofisi suite.
Ipo iyo LibreOffice 6.1 nhevedzano inoramba ichikurudzirwa kune vanofarira uye vashandisi vepamberi chete, ramba uchigamuchira zvigadziriso nenhau. Mune ino LibreOffice 6.1.3 inopfuura makumi matanhatu neshanu yekukanganisa yakagadziriswa, sezvaungaona mune chinyorwa chepamutemo.
Sezvakangoitikawo, iyo LibreOffice 6.0 inogadziridza inouyawo ne66 inogadzirisa. Mahara Hofisi 6.0.7 inokurudzirwa kune vakajairika vashandisi uye bhizinesi rinoshandisa kutsvaga kuvimbika uye chengetedzo.
Zvinokurudzirwa kugadzirisa zvese zviri zviviri shanduro dzeLibreOffice
Iyo Gwaro Foundation inokurudzira kuti vese vashandisi veLibreOffice vagadzirise kuiswa kwavo, zvisinei kuti ndeye LibreOffice 6.1.3 kana 6.0.7, zvichienderana nebazi ripi re suite iwe urimo, unogona kukwidziridza kubva ku6.0 kuenda ku6.1 dzakateedzana kana uchida kuyedza zvese zvitsva.
Ipo iyo LibreOffice 6.1 nhepfenyuro yekuvandudza kutenderera ichaenderera ne LibreOffice 6.1.4 yekugadzirisa kugadzirisa, iyo ichauya imwe nguva mwaka wegore usati waperaLibreOffice 6.0 inomira kugashira rutsigiro mwedzi uno, kunyanya munaNovember 26, funga kugadzirisa.
Iyo Gwaro Foundation iri kushanda pane inotevera yekugadzirisa yekugadzirisa, LibreOffice 6.2 inotarisirwa muna Kukadzi 2019, iri vhezheni yazvino ine rutsigiro rwe 32-bit zvivakwa pane Linux masisitimu. Unogona download LibreOffice 6.1.3 uye LibreOffice 6.0.7 kubva ku yepamutemo Webhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » FreeOffice 6.1.3 inosvika ichigadzirisa zvikanganiso makumi matanhatu nezvitanhatu